Dayax gacmeedyada saadaasha hawada: astaamaha iyo howlgalka | Saadaasha Shabakadda
Dayax gacmeedyada saadaasha hawada
Saadaasha hawada waa lagama maarmaan in la helo dayax gacmeedyada saadaasha hawada ku wareegaya dhulkeenna. Waxaa loo adeegsadaa ogaanshaha iyo falanqaynta dhammaan astaamaha jawiga iyo arrimaha kala duwan ee saameeya cimilada iyo ifafaaleyaasha jawiga. Waxay sidoo kale muhiimad weyn u leedahay howlaha aadanaha iyo horumarkooda. Waqtiyadii hore waxay ku xirneyd howlaha militariga iyo qorsheynta xaalado kala duwan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan astaamaha, iyo muhiimadda dayax gacmeedyada saadaasha hawada.
2 Faa'iidada dayax gacmeedyada saadaasha hawada
3 Hababka loo helo macluumaadka
U kuurgalka jawiga iyo xaaladihiisa waa lama huraan in la ogaado cimilada meeraha. Dayax gacmeedyada ayaa mas'uul ka ah ilaalinta, ogaanshaha iyo duubista dhammaan saadaasha hawada. Baadhitaannada noocyo iyo astaamo kala duwan ayaa loo adeegsadaa daraasadaha jawiga kala duwan. Qaarkood waxay leeyihiin xaddidaadyo qaar sida xaddiga shucaaca qoraxda. Tusaale ahaan, waxaa jira dayax gacmeedyada saadaasha hawada oo ku shaqeeya shucaaca infrared infrared oo aan u baahnayn in qorraxdu ku shaqeyso. Si kastaba ha noqotee, haddii aad u baahan tahay xog dheeri ah ama miisaanka waqtiga dhabta ah, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho faafis deg deg ah oo aad u ballaaran.
Adeegsiga dayax gacmeedyada saadaasha hawada Waxay bilaabatay Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib. Waxay qaadatay 10 sano in la soo saaro dayax gacmeedkii ugu horreeyay tan iyo 1947, maadaama ay ku jirtay daraasad iyo cilmi baaris isdaba joog ah. Fikradda ayaa si dhakhso leh ugu soo baxday hab lagu sharxayo dhacdooyinka cimilada si looga caawiyo xaaladaha militariga. Waqtigan xaadirka ah, qaabab kala duwan oo ogaanshaha ayaa la adeegsadaa waxaana guud ahaan muuqaalka laga isticmaalaa ultraviolet ilaa microwaves, iyada oo loo marayo muuqaalka muuqaalka dadka iyo hirarka raadiyaha.
Shuruudaha isticmaalka dayax gacmeedyada saadaasha hawada
Si loo gaaro isticmaalka saxda ah ee dayax gacmeedyada saadaasha hawada, shuruudaha qaarkood waa in la buuxiyo, sida kuwa soo socda:
Ahaanshaha goob taas aad uga fog si loogu oggolaado in laga waramo aagga oo dhan halka aad rabto inaad saadaasha ka sameyso. Meel aragti ah ayaa loo baahan yahay oo u oggolaanaysa aqoonsiga cufnaanta daruuraha iyo dhammaan sifooyinka juqraafiyeed ee dhulka. Tani waxay u adeegtaa si loo dejiyo cawaaqibka suurtagalka ah ee astaamaha saadaasha hawadu ay ku sababi karaan dhulka heerka dhulka.
Barakaca dayax-gacmeedka waa in loo qorsheeyaa qaab sidaas ah beertaada aragga ahi waxay soo baxdaa 12-kii saacadoodba mar. Way ku habboon tahay in laba jeer lagu safro isla daruuraha si loo awoodo in si sax ah loo aqoonsado khalkhalka jawiga ee la xiriira nidaamka daruurta.
Xawaaraha dhaqdhaqaaqa satalaytku waa inuu noqdaa mid u oggolaanaya meel sax ah dhammaan nidaamyada daruuraha ee daraasadda lagu sameynayo marka loo eego aagagga dhulka ee ay saamaynta ku leedahay.
Caadiyan ku dhowaad dhammaan duufaannada waxay u dhaqaaqaan bari dhanka galbeed. Sababtaas awgeed, dayax-gacmeedyada cimiladu waa inay lahaadaan qayb dhaqdhaqaaqa galbeed ka ah. Waxaan ula jeednaa galbeedka marka la eego dhulka dushiisa. Sidan oo kale, waxay awood u leedahay inay ogaato khalkhalka jawiga hawada ee soo bixi kara iyadoo kuxiran nidaamka daruurta ee la falanqeynayo.
Dhulka oo dhan waa in la daboolaa ugu yaraan hal mar maalintii. Tan awgeed, waxaad kuheli kartaa aragti guud oo ku saabsan jawiga guud ee jawiga guud.
Dhammaan shuruudaha aan dejinay waa la buuxiyay illaa intii loogu talagalay dayax gacmeedyada ku jira 2.01 raadiyaha dhulka. Waa in had iyo jeer laga tirsadaa bartamaha Dunida iyo muddada wareegga ee ilaa 4 saacadood oo sax ah.
Faa'iidada dayax gacmeedyada saadaasha hawada
Aan aragno nooca utility ee ay soo ururiyeen dayax gacmeedyada saadaashu waxay yeelan karaan. Waxaan ognahay in laga soo bilaabo 1966, dusha sare ee meeraheenna si joogto ah looga sawirayo, ugu yaraan hal mar maalintii. Dhamaan sawirada looma isticmaalo kaliya waqtiga dhabta ah, laakiin waxaa loo keydiyaa si loo sameeyo tirakoobyo kaladuwan iyo cilmi baaris ku saabsan cimilada. Sidaan ognahay, cimilada cimilada ayaa ah sayniska daraaseeya dhamaan isirrada saadaasha hawada iyo cimilada ee heerka waqtiga juqraafiyeed. Si kale haddii loo dhigo, waxaa la dhihi karaa cimilada cimilada ayaa ah isu geynta dhammaan doorsoomayaasha iyo dhaqankooda waqtiga.
Macluumaadkan la helay mahadcelinta dayax gacmeedyada saadaasha hawada ayaa aad waxtar badan u leh xaalado badan. Aan aragno tusaalooyin ka mid ah:
Adduunyada meeraheeda waxaa jira aagag waaweyn oo kaladuwan oo macluumaad laga helo iyadoo loo mahad celinayo hababka caadiga ah sida lamadegaanka, aagagga cirifka iyo ballaadhinta badda cirifka waqooyi iyo koofureed ee aadanuhu uusan ku baran karin meesha. Thanks to noocan ah tiknoolajiyada waxaan ka heli karnaa macluumaad ku saabsan meelahan iyada oo aan loo baahnayn.
Mid kale oo ka mid ah kiisaska macluumaadka laga helay dayax gacmeedyada saadaasha hawada ay aad waxtar ugu yeesheen ayaa ah goobta iyo la socoshada duufaannada, duufaannada iyo dabeylaha kulaylaha. Aad ayey muhiim u tahay in la helo macluumaad ku saabsan dabeecadaha astaamaha saadaasha hawada ee xad dhaafka ah si loo helo taxaddarro xad dhaaf ah oo looga fogaado aafooyinka suurtagalka ah.
Xogta ay bixiyaan dayax gacmeedyada saadaasha hawada waxaa loo isticmaali karaa in lagu helo jaantusyada heerkulka dusha sare ee badda. Heerkulka dusha sare ee badda waa isbeddel muhiim ah maaddaama ay tahay qodobka go'aaminaya dhaqdhaqaaqa qulqulka badda. Macluumaadkani waxtar uma leh cimilada oo keliya, laakiin sidoo kale wuxuu u leeyahay badmaaxnimada iyo kalluumeysiga.
Hababka loo helo macluumaadka
Nidaamka kaliya ee awooda inuu helo isku darka guud ee heerkulka jawiga iyo dherer kala duwan ayaa ah dayax gacmeedyada saadaasha hawada. Daahfurka dayax-gacmeedka saadaasha hawada waxay u baahan tahay xamuul. Faa'iidada in gawaarida hawada ku xir Waa in loo adeegsado qaab lagu helo macluumaad shaybaarrada muddo ka badan kuwa duulimaadyada dhulka hoostiisa mara. Waad ku mahadsan tahay gaariga noocan ah waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan dhinacyada soo socda:
Xakamaynta heerkulka dhammaan qaybaha jawiga iyo dusha sare ee dhulka.
Isgaarsiinta dibadda iyo gudaha.
Ka shaqeynta xogta hawada.
Xakamaynta xasiloonida iyo dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa militariga labadaba.
Saamaynta shucaaca cosmic-ka ee meeraheenna.
U fiirsashada deegaanka
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto dayax gacmeedyada saadaasha hawada iyo sida ay u shaqeeyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Qalabka Saadaasha hawada » Dayax gacmeedyada saadaasha hawada